लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइक कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने? | ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइक कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने?
लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइक कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने?
यदि तपाइँको ग्राहकहरु जहिले पनि अधिकतम यात्रा को दूरी को लागी उनीहरु सिगल चार्जमा जान सक्दछन्, त्यसैले माइलेज पनि तपाइँको ग्राहकको लागि निर्धारण कारक हुन सक्छ। कुन ई-बाइक हो भनेर कसरी जान्ने लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइक। तिनीहरू एकल चार्जमा कतिसम्म इलेक्ट्रिक बाइक चलाउन सक्दछन्, जबसम्म तिनीहरू मैन्युअल्ली घरको पेडिलिंगमा आपत्ति जनाउँदैनन् किनकि ब्याट्री यात्रा समाप्त हुनुभन्दा अघि नै सूखा भयो। तर यात्रा दूरी गणना गर्न सजिलो छैन, त्यसैले प्रत्येक ebike मा परीक्षण वा मूल्यांकन दायरा हुनेछ, तर यो पूर्ण रूपमा सही नहुन सक्छ। यसको सट्टा इ-बाइक परीक्षण सामान्य रूपमा अधिक नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा गरिन्छ - स्तर फुटपाथ अवरोधहरू, राम्रो मौसम, इत्यादिबाट मुक्त हुन्छ।
वास्तवमा, प्रत्येक इलेक्ट्रिक बाइक साइकल चालकहरूले e-बाइकको सवारी दूरी विचार गर्दैनन्। सामान्यतया भन्नुपर्दा, लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइकको यात्रा दूरी इलेक्ट्रिक ब्याट्री र मोटरको आकार र शक्तिद्वारा निर्धारित गरिन्छ।
तर त्यहाँ इ-बाइकको दायरा निर्धारण गर्ने कारकहरू समावेश छन्, जसमा: राइडरको तौल, टेर्रेन (पहाडहरू विरूद्ध बनाइएको सपाट सडक), सामानहरू जति तपाईं उठाउनुहुन्छ, हावा अवस्थाहरू, सहायताको छनौट स्तर, ब्याट्रीको क्षमता, मोटरको पावर र यस्तै। यदि एउटा ई-बाइक यात्रा दायरा महत्वपूर्ण कारक हो भने, तपाईंले प्याडल सहायताको स्तर र ब्याट्री क्षमताको सीमालाई कसरी प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ जुन तपाईं एकल ब्याट्री चार्जमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
प्याडल सहायताको स्तर
लामो दायरा इलेक्ट्रिक बाइक साझा प्याडल सहायता मोड र थ्रॉटल सहायता मोडमा विभाजित।
प्याडल सहायता मोड पावरहरू हुन्छ जब प्याडलहरू क्र्या .्क हुन्छन्। त्यसैले तपाईं पावर बिना परम्परागत साइकलको रूपमा पेडेलिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा बाइकले पेडलहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। इलेक्ट्रिक बाइक मोटर कार्य गर्दछ जब प्रणालीले तपाई प्याडलिंग गर्दै गरेको दर पढ्छ। तपाईं चाँडो पेडल, मोटर छिटो हुन्छ। ठूलो शक्ति, मोटर अधिक प्रदान गर्दछ। टोक़ प्रणालीको साथ एक ebike पहाडहरूमा सवारी गर्न धेरै सजिलो छ किनकि तपाईंलाई शक्ति चाहिन्छ जब तपाईंलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, यद्यपि तपाईंको प्याडिंगको दर तपाईं सपाट मैदानमा भएको भन्दा कम छ। सामान्यतया, लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइकमा पेडल सहायताको or वा level स्तर हुन्छन्। उदाहरण को लागी, Shuangye इलेक्ट्रिक बाइक को प्याडल सहायता को3स्तर छ,5देखि6स्तर बीच कुनै पनि स्तर छनौट गर्न सकिन्छ।
थ्रोटल असिस्ट मोडको मतलब भनेको लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइकले अगाडि बढाउछ जब बाइकरले एक बटन थिच्दछ, एक लीभर (थ्रोटल) पुश गर्दछ, वा ह्यान्डलबारलाई मोड्दछ। थ्रोटल सामान्यतया ebike को ह्यान्डलबार माउन्ट गरिएको छ र इलेक्ट्रिक ड्राइभ प्रणालीमा जडित छ कि ebike को गति नियन्त्रण गर्दछ। कडा हार्ड राइडर थि्रटल थिच्न, ebike छिटो जान्छ। शुआग्ने इबाइकले थम्ब थ्रटल प्रयोग गर्‍यो, जुन बाइकर प्रयोगको लागि बढी सुविधाजनक छ।
सामान्यतया, एक प्याडल सहायता ebike एक थ्रोटल सहायता ebike भन्दा लामो दायरा छ।
ब्याट्री मोटर को लागी शक्ति प्रदान गर्दछ, जसले पा turn्गा घुमाउँछ। धेरै लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइकले लिथियम ब्याट्री पावर सप्लाईको रूपमा छनौट गर्दछ, जुन आज बजारमा सब भन्दा प्रचलित ब्याट्री हो। र यो एक मात्र चार्जमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ लामो दूरीमा मद्दत गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रकारको ब्याट्री हो। जति घनत्व हुन्छ, ब्याट्रीको अधिक ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्दछ, थप तपाई ई-बाइक चढ्न सक्नुहुनेछ। अन्य ब्याट्री प्रकारहरूको तुलनामा, लिथियम-आयन ब्याट्रीसँग अधिक ऊर्जा घनत्व छ।
कुन ब्याट्री क्षमताले ई बाइकलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा जान्न। वास्तवमा, उच्च भोल्टेज र Amp-hrs मतलब ब्याट्री मा अधिक चार्ज कुल शुल्क।
विचार गर्नको लागि अर्को चर ब्याट्री क्षमता हो। ब्याट्री क्षमता वाट-हर्सको रूपमा गणना गरीयो, जुन ब्याट्रीमा भण्डारित कुल शुल्कको एक उपाय हो। Vol 36 भोल्ट र vol 48 भोल्ट ब्याट्री बजारमा सामान्य छ, शुआंगे इलेक्ट्रिक बाइकमा तपाईको ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न 60० भोल्ट ब्याट्री पनि छ। तर त्यहाँ battery 48 वोल्ट ब्याट्री छनौट गर्न धेरै ब्याट्री क्षमता पनि छन्, जस्तै भिन्न शक्ति र प्रकारको इलेक्ट्रिक बाइकको लागि १०ah-ah०ah।
यी केवल दुई महत्त्वपूर्ण कारकहरू इलेक्ट्रिक बाइक लामो दूरी सवारीलाई प्रभाव पार्न। यदि तपाईं लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइकको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अघिल्लो लेखहरू ब्राउज गर्न वा हाम्रो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक वेबसाइट, पनि तल तपाईंको सन्देश छोड्न सक्छ।
Tags:लामो दूरी इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक बाइक प्याडल सहायता
अघिल्लो: शुआंगे तपाईलाई १२127 औं क्यान्टन फेयर २०२० मा भेट्छन्
अर्को: कसरी एक इलेक्ट्रिक बाइक को ब्याट्री स्वस्थ राख्न